စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဒုတိယအဆင့် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သမ္မတ ကြေညာ
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ လူနေမှုဘဝနဲ့ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဒုတိယအဆင့်ကို ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပသော အစည်းအဝေး၌ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်းကို ၇% အထိ ရည်မှန်းထားကြောင်း သမ္မတရဲ့မိန့်ခွန်းမှာ ပါရှိ ပါတယ်။
ဒီငါးနှစ်တာကာလ စီမံကိန်းမှာ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍကို လျှော့ချပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိ အစိုးရ ရငွေ သုံးငွေစာရင်းမှာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျပ်ငွေ ကုဋေ ၂ သိန်းကျော်၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျပ်ကုဋေ ၂ သိန်းနီးပါး လိုငွေပြနေကြောင်း၊ ဒီအတိုင်း ဆက် လက် ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံစီးပွားရေးကို ထိခိုက်လာနိုင်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ မဖြစ်အောင်လည်း ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုနေကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အောက်ခြေ ကျေးလက်ဒေသတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် ခရိုင် ကျေးရွာအထိ ဆင်းရဲမွဲတွေမှု လျော့ချရေးအတွက် အစိုးရကနေ စီမံသွား ဖို့ ပြင်ဆင်မှုတွေလည်း ပြောထားပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆောင်ရွက်ကြဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းပြောသွားပါတယ်။
ဒီလို ရေတိုငါးနှစ်တာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် ပြည်ပအကူအညီ အထောက်အပံ့နဲ့ ချေးငွေတွေလိုအပ်သလို၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်း လိုအပ်ကြောင်း၊ ပြည်ပမှာရှိနေ တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုလည်း လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲကို အဆင့်တိုင်းမှာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေလိုမျိုး လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ပြီး တောင်းဆိုမှုတွေ လုပ်စရာမ လို တော့ကြောင်းလည်း ပြောထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အီဘိုလာရောဂါပိုး လုံးဝမရှိကြောင်း ကြေညာ
တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ထက် လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြသာနာတွေကိုအရင်ရှင်းပေးစေချင်ပါတယ် အစိုးရဆိုတာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြသာနာတွေအပေါ်မှာတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးထင်တယ် ဘာလည်း တခြားတိုင်းရင်းသားတွေမို့လို့လား
My dear President... since Myanmar is made up of multi-nationalities as well as multi-cultural. Therefore, to have round table discussion,political diologue face to face with ethnic groups is urgently needed to attain peaceful life within the country. Education and helth care are the other points to think off, without education, ther is no wisdom, without wisdom, there is no respect, without respect, there is violence. Education isavital needed in the country.